विशिष्ट व्यक्तिहरुले यसरी गरे मतदान (फोटो फिचर) « News of Nepal
विशिष्ट व्यक्तिहरुले यसरी गरे मतदान (फोटो फिचर)
काठमाडौंदोस्रो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनीधिसभा निर्वाचन देशभर भइरहेको छ । राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले देशका विभिन्न जिल्लाका मतदान केन्द्रबाट यसरी मतदान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका-१ को असिग्राम माविबाट मतदान गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ को बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । मतदान गरेपछि ओलीले चुनाव टार्ने प्रधानमन्त्रीका सबै प्रयास असफल भएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १४, शान्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गरिसकेपछि देशले समृद्धिको यात्रा शुरु गरेको बताएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा इलाम क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार झलनाथ खनालले निर्वाचनसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । सूर्योदय नगरपालिका १० स्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय रम्फोकबाट बिहान १० बजे मतदान गरेपछि खनालले अब मुलुकको जटिल संक्रमणकाल समाप्त भएर समृद्धि तर्फ अघि बढेको पनि बताए ।
राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे (९९ बर्ष) मतदान गर्नुहुदै!
दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बिहीबार काठमाडौंको सानो गौचरनस्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ।
बाम गठबन्धनका तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र न १ बाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बाँसगढी नगरपालिका-८ ककौरामा रहको त्रिभुवन माविबाट मतदान गरेका छन् ।
काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले मतदान गरेका छन् । नेता पौडेलले सत्यवति माविको ख मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
धनुषास्थित राजेश्वरनिधि उच्च माविबाट कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले मतदान गरेका छन्।
उद्योगी विनोद चौधरीले नवलपुरबाट मतदान गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले आज दिउँसो दुहवी नगरपालिका–२ तुताहास्थित नवीन निकेतन शिक्षा विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
सेतो कपडा बेरेर प्रचण्डकी बुहारी बिनाले गरीन मतदान
विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले ललितपुरको भैँसेपाटीबाट मतदान गरेका छन्। मत खसाल्न उनी बिहान ७ बजे नै रत्नज्योति महिला परिवार भवनस्थित मतदान केन्द्र पुगेका थिए । उनी काठमाडौं क्षेत्र १ उम्मेदवार हुन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले थापाथलीस्थित सरस्वती विद्या मन्दिर उच्चमावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
रमेश लेखकद्वारा मतदान
काँग्रेस नेता सिटौलाले झापा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं १०, बाट मतदान गर्नुभएको हो ।
हेटौंडा ६ मा रहेको वंशगोपाल मावि चौघडा मतदान केन्द्रमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले विहान पौने ८ बजे मतदान गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री थापाले मतदानपछि प्रतिक्रिया दिँदै आफूले आफ्नो नागरिक दायित्वअन्तर्गत् मतदानको काम पूरा गरेको बताउनुभयो ।
शंकर पोख्रेलले गरे मतदान, उनी भन्छन्ः ‘अब स्थायि सरकार बन्छ’
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले चुनावमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै नभएको दावी गरेका छन् । काठमाडौं क्षेत्रनम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सिंहले अरु उम्मेदवारहरु कमजोर रहेकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरे ।
काठमाडाै क्षेत्र नं ४ का प्रतिनीधिसभाका उम्मेदवार गगन थापाले भाेट हालेका छन् । थापा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् ।
काठमाडाै क्षेत्र नं ४ का प्रतिनीधिसभाका उम्मेदवार राजन भट्रटराइले भाेट हालेका छन् । भट्रटराइ बाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार हुन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का उम्मेदवार एवम् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफू विजयी हुने दावी गरेका छन् । पूर्व मन्त्री पण्डितले विराटनगरलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. ३ बाट बाम गठबन्धनका लागि राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनले मतदान गरेका छन् । उनले झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाको गोल्धाप मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिरबहादुर बलायरले बिहीबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको दोस्रो चरणको निर्वाचनेमा शिखर नगरपालिका–८ तिलतालीको राधाकृष्ण उच्च मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् ।
महोत्तरी क्षेत्र न. २ का प्रतिनिधि सभाका उमेदवार शरत सिंह भण्डारीले मतदान गरेका छन् । महोत्तरीको अाैरही नगरपालिका-१ स्थित जनता प्रावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता एवं ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार पम्फा भुसाल मतदान गरेकी छिन्।
एमाले नेता एवं भक्तपुर– २ का उम्मेदवार महेश बस्नेत गुण्डुमा मतदान गरेका छन् ।
बैंकर अनिल शाहले काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट मतदान गरेका छन् । मतदान गर्दै शाहले आजको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता रहेको बताए ।
“मैले त आज विवेक पुर्याएर भोट हालें ताकि भोलि पछुताउन नपरोस्१
तपाई पनि भोट हाल्न पक्कै जानु होला। आउनुहोस्, सँगै मिलेर ईतिहास रचौं।”
म्याग्दीका कोत मन्दिरहरुमा फुलपाती भित्र्याइयो(फोटोफिचर)
आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित
भुकम्पकाे पिडाः गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने